သဘာဝဘေးဒဏ်အလ္လာ့အမျက်တော်မဟုတ် – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on September 3, 2010 September 4, 2010 by kyawkyawoo	Posted in သဘာဝဘေးဒဏTagged တရုပ်ရေဘေး လူတသန်းမှနှစ်သန်းခွဲသေဆုံး, တွင်းနက်ကြီးများ, ပါကစ္စတန, လူ့သမိုင်းမှာလူအသေအပျောက်အများဆုံး, သဘာဝဘေးဒဏ်, သဘာဝဘေးဒဏ်အလ္လာ့အမျက်တော်မဟုတ်, ကျော်ကျော်ဦး,ဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့, burmese muslim, Burmese Muslims, chinese muslims, islam in Myanmar, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion
ပါကစ္စတန် တနိုင်ငံလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရေဘေးကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီPost ကိုရေးဖြစ်တယ်။
၁၉၃၁ခုနှစ် တရုပ်ရေဘေး လူတသန်းမှနှစ်သန်းခွဲသေဆုံး
၁၈၈၇ခုနှစ် တရုပ်ပြည်မြစ်ဝါရေဘေး လူကိုးသိန်းမှနှစ်သန်းသေဆုံး
၁၉၇၀ ဘင်္ဂလာဒရ်ှ ဘိုလားဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း သေဆုံးသူငါးသိန်း
၁၉၇၆ တရုပ်ပြည်တန်ရှန်ငလျှင် သေဆုံးသူ နှစ်သိန်းလေးသောင်း
ဒီနေ့တိုးတက်နေတဲ့တန်ရှန် ၂၀၀၄စူနာမီ သေဆုံးသူနှစ်သိန်းသုံးသောင်း အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်း၊သီရိလင်္ကာ
သမ္မာကျမ်းစာနဲ့အခြားရှေးကျမ်းများမှာလဲဒီအပြစ်တွေအကြောင်းပါပေမဲ့ လူတွေပြူပြင်ထားလို့လွဲနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုကျမ်းမြတ်ကုရအန်မှာ အမှန်အတိုင်းပြောပြထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ကျရောက်တဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းတူညီတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိကြောင်းလဲ ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်
၁။ လူသားမျိုးနွယ်တစုသည် ဖန်ဆင်းရှင်တားမြစ်ထားသောကြီးလေးသောပြစ်ဒဏ်
ကြယ် ကြီးများတောင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှသက်တမ်းကုန်ပြီး တွင်းနက်ကြီးများဘဝပြောင်းရတာအားလုံးအသိပါ။
ဒီလောကမှာလဲအောငမြင်မှူ ရမဲ့ အပြင်နောင်တမလွန်မှာလဲအရှင်မြတ်ရဲ့မဟာဂရူဏာတော်နဲ့
4 thoughts on “သဘာဝဘေးဒဏ်အလ္လာ့အမျက်တော်မဟုတ်”
Sabal Phyu says:
အခုလို ဘာသာပြန်ပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
W Slam WBt
Thank you for your comment Ma Sabal Phyu. You have createdavery nice blog. I am going to link with mine, if you don’t mind.
May be you thinking so much about Allah..You can be crazy…
သေချာတာတစ်ခုကတော့ ကျော်ကျော်ဦး…… ခင်များရူးနေပြီ။ မယုံရင် ဆေးရုံသွားပြကြည့်။